24 Aug, 2018 - 00:08	 2018-08-23T10:51:10+00:00 2018-08-24T00:04:16+00:00 0 Views
NDAPOTA musafone panhamba idzi 0775 831 462, ini handizi kutsvaga murume uye pane munhu akashandisa nhare yangu kutumira kuKwayedza. Ini ndine murume wangu uye ndine makore 63 okuberekwa asi akatumira uyu akati ane makore 21 okuberekwa.
Ndiri murume ane vana vatatu ndinozvishandira uye ndinotsvagawo musikana kana mukadzi ane vana vakewo kana asina. Andifarirawo ngaandibate pa0784 772 337.
Ndiri murume ane mwana 1, ndinodawo mukadzi ane mari dzake anoda murume wekugara naye. Andida ngaandibate paWhatsApp kana kufona pa0718 470 883. Mukaisa tsamba yangu ndingafare, ndaneta nematsotsi chete.
Kwaziwayi veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 45, ndiri muHarare uye ndinotsvagawo murume. Andifarira ngaandibate pa0777 262 163.
Ndiri mukadzi ane makore 37 nemwana 1, HIV positive uye ndodawo murume anoda wanano ari positive. Ndinobatika pa0771 325 024.
Ndiri mukomana ane 34, ndinoda musikana ane makore 23 zvichikwira asina kumboroorwa. Ngaave achida zvekugara kumusha uye kupinda chechi dzemweya. Nhare yangu 0785 526 477.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 21 nemwana 1, ndinoda murume akatendeka anoda zvemba. Nhare yangu 0784 861 564.
Ndiri murume ane makore 35, ndinoda mukadzi ane makore 22 zvichikwira ari pachokwadi uye ane rudo neniwo. Handisi kushanda, ndiri muHarare ndobatika pa0715 983 101.
Makadii? Ndiri murume ane makore 39, pautano negative uye ndodawo mukadzi ane mwana 1 kana 2. Zvakawanda tozotaura, ada ngaandibate pa0782 025 922.
Ini ndiri mukomana ari kuda musikana ane makore 20 – 24 wekuroora. Ndinoshanda sagrader operator, nhare yangu 0776 156 107.
Ndinotenda chirongwa, ndiri murume ane makore 41 nevana 3 ndotsvakawo mukadzi akazvibata anoda zvemusha chero wegore ripi zvaro. Nhare yangu 0773 551 449.
Ndiri murume ane makore 36, ndinotsvagawo mukadzi wekuwana ane makore 28 – 34. Anoda ngaafone pa0771 850 590.
Ndiri murume ane vana vatatu, ndiri kutsvakawo mudzimai anoda zvemba. Ndine makore 36, anoda ngaandibate pa0779 685 986.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 25. Ngaave ane rudo, anotya Mwari uye ari pachokwadi. Ngaandibate pa0775 890 130.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana wekuroora, ngaave akanaka uye ane hunhu. Andida ngaandibate pa0773 850 757.
Makadini henyu VaShamba? Ndiri mukomana ane makore 20 anoda musikana wekufambidzana naye ave nemakore 18-20. Anokwanisa kundibata pa0713 863 617.
Makadini henyu? Ndiri murume ane makore 43, ndinotsvagawo mudzimai wekushamwaridzana naye akatendeka. Nhare yangu 0732 125 384.
Makadii? Ndiri murume ane makore 39, ndotsvagawo mukadzi ari positive. Nhare yangu 0774 925 421.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 34 ndotsvagawo musikana anoda imba. Kana pane andidawo anondibata pa0778 343 676.
Ndiri mukadzi ane makore 37, ndinotsvagawo shamwarirume yakavimbika yekushamwaridzana nayo ine makore 40 kusvika 55. Nhare yangu 0773 683 054.
Ndine makore 40, ndotsvagawo mukadzi ane makore ari pasi pe40. Ngaave ari negative, ndine vana vaviri. Nhamba yangu 0774 385 128.
Makadii veKwayedza? Ndinotenda nechirongwa chenyu, ndakamuwana wandaida. Vese vaifona pa0776 166 475 chiregai henyu. Ndatenda.
Makadii? Ndiri murume ane makore 29, ndinotsvaka musikana anonamata uye munaku kubva pamakore 20 kusvika 27. Ndinoshanda uye ndinobatika pa0771 841 091.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 24 nevana 2, handisi pamushonga uye ndotsvakawo murume ari pasi pemakore 35 zvichidzika. Ndatenda zvangu, nhare yangu 0773 246 879.
Makadiiko veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 36 nevana vatatu, ndinodawo mukadzi murefu akati simbei. Ngaave ane makore 24 – 27 ane mwana wake kana asina. Vanoda ndibatei pa0715 897 006.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 33, ndotsvagawo murume ane makore 35 kusvika 40 anoda zvekuroora uye ari pachokwadi. Ari HIV negative ngaandibate pa0777 120 527.
Ndine makore 43 uye ndotsvagawo mukadzi wekuroora asina kumbobvira aroorwa kana kuita mwana. Andifarira fona kana kutumira sms pa0715 350 669.
Ndiri murume ane makore 36, HIV positive uye ndinotsvagawo mudzimai wekuroora. Nhamba dzangu 0773 829 193.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24 ndotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore 18 kusvika 24 anoshanda muHurumende kana rimwe basa rinoitawo kuti hupenyu hufambe. Ngaave anogezawo uye achigara muHarare. Andifarira ngaandbate pa0714 488 823. Ndingafara kana mukabudisawo shambadzo yangu.
Ndishambadzewo, ndiri murume ane makore 45 ndodawo mudzimai muKaranga, muManyika kana muChangani akarongeka. Anoda zvemba ada ndibate pa0779 921 657.
Makadii? Ndiri murume ari kutsvagawo mukadzi mudhafu dhafu ane mazamu mahombe ane mari dzake. Ngaave ari HIV negative ane makore 47 kusvika 35. Ngaandibate pa0782 587 271.
Makadii vashambadzi vechirongwa? Ndiri mudzimai ari kudawo kuwanikwa. Ndinodawo murume anoda zvemba, ndine makore 43. Ngaave ane makore 45 kana 55. Andifarira ndibate pa0716 121 986 totaura zvizhinji.
Ndiri murume ane makore 52, HIV positive uye ndiri mudzidzisi. Ndinotsvaka mudzimai wokudanana naye kunyanya mudzidzisi mukoti kana mupurisa. Nhare yangu 0717 184 120.
Makadini veTishamwaridzane? Vanhu ngavachirega havo kufona panhamba dzinoti 0784 802 820, ndakamuwana andaida.
Makasimba here? Ndiri mukomna ane makore 20, ndinotsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika. Anoda anondibata pa0777 161 033 asi ngaave anogara muHarare.
Ndiri mukomana ane makore makumi matatu, ndinotsvakawo musikana anoda zvekuroorwa ane makore ari pasi peangu ari HIV negative. Anonamata Mwari ngaandibate pa0716 929 179.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 36 nevana 2, ndiri pamushonga uye ndodawo murume ave kuda kuroora ane makore 45 – 55 asina mukadzi. Ndiri kuMarondera, anoda ngaandibate pa0782 688 238.
Ndiri murume ane makore 32, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 20 kusvika 25 anoda zvemba. Anoda ngaandibate pa0777 936 590.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 31 nevana vatatu. Ndiri kutsvaka murume ane makore 48 – 55 asiri pamushonga. Andifarira nhamba yangu 0774 746 577.
Ndiri murume ane makore 49, ndinotsvagawo mukadzi wekufambidzana naye ane makore 35 – 46. Ndinoda ticha uye ndinogara muHarare. Nhare yangu 0718 805 563.
Ndiri mukomana ane makore 31, ndotsvagawo musikana wekuvaka musha naye kubva pamakore 20 kusvika 28. Ndiri kucollege kuita teaching. Andidawo nhamba yangu 0715 828 651.
Makadii zvenyu? Ndiri mukadzi ane makore 33 uye ndiri pamushonga. Ndotsvagawo murume ari pachokwadi anoda zvekuroora. Andifarira nhamba dzangu 0717 404 081, zvizhinji tozotaura.
TISHAMWARIDZANE02 Aug, 2019
TISHAMWARIDZANE26 Jul, 2019
TISHAMWARIDZANE21 Jun, 2019